Lọ ọrụ Art Candle | Ndị na-emepụta ihe na ndị na-enye ihe nkiri China Art
N'ogbe ahu na-enweta oriọna kandụl na-acha uhie uhie
Aha: N'ogbe mkpuchi / oriọna kandụl na-acha uhie uhie Ngwurugwu: 7 * 6cm Nkwakọ ngwaahịa: 100pcs / katoonu, tangerine / oroma dị mma kandụl mere nke paraffin wax elu, kandụl bụ aka. Mmanụ ndị dị mkpa na - abụkarị mmanụ aromatherapy. Enwere ike ịwụnye kandụl mkpụrụ osisi mara mma ma na-achọsi ike n'ime ụlọ na ebe ime ụlọ. A ga-ahụrịrị ya n'anya dị ka onyinye maka ndị enyi, nne, enyi nwanyị na nwanne.
Wunye kandụl na-egbu nwa maka ịchọ mma achicha ụbọchị ọmụmụ
Aha: Wunye kandụl na-eme nwa maka achicha ụbọchị ọmụmụ Size: 9 * 6 * 6CM Ikike: 65g nkwakọ ngwaahịa: 100pcs / katoonu, kandụl na-ehi ụra na nwa a na-achọ mma ịchọ mma ụbọchị achicha. The kandụl nwere nwa nwoke na nwa nwanyị, Ọ bụrụ na nwa gị na-eme ememe ụbọchị ọmụmụ, ịnwere ike iji ya chọọ ya mma.
kandụl taper kandụl, kandụl taper, beeswax votive kandụl, kandụl beeswax, kandụl votive, kandụl ogidi beeswax,